ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အ Sensation ပါတီ Hosting မှဆယ်ချက်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 12 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
အဆိုပါ #1 အသစ်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကိုသွားရာအရပ်သို့နေရာတိုင်းဆိုရင် single တိုင်ကြားစာဖြစ်ပါတယ်. သူတို့င်ပဲဖြစ်ဖြစ် 25 သို့မဟုတ် 65, တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အဘားမြင်ကွင်းတစ်ခု ကျော်လွန်. ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အဖွဲ့ဝင်များကိုခရီးဦးကြိုသောနေရာများအတွက် Lookout အပေါ်အမြဲရှိတယ်. တစ်ဦးဖြစ်ပျက်အိမ်သူအိမ်သားပါတီပစ်ဘို့ဤအဆင့်များ Follow နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် singles scene အဘို့အစင်မြင့်သတ်မှတ်.
1. ကို Date: Midweek စုဝေးနင်္ဂနွေပျော်စရာအဘို့ကြီးသော prep များမှာ. ဧည့်သည်အနာဂတ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. တနင်္ဂနွေပါတီများ '' ရက်စွဲညဥ့်အခါများမှာ’ တစ်ခုတည်းသောတပတ်. အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားမျှော်လင့်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်ပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိကြလော့. ထိုလိင်အကြားအဆင့်မြှင့်မျှော်လင့်သင့်ပါတီမှာ bar နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဗေဒထမြောက်စေမည်.
2. အဆိုပါဖိတ်ကြားခြင်း: အီးမေးလ်စေခြင်းက de rigueur ဒီနေ့ပါတီလူအုပ်ကြီးဒါပေမယ့်အချည်းနှီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အော့ဖ်လိုင်းထုံးစံဖိတ်ကြားချက်ကို၏အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များခံစား beats. ပါတီအရွယ်အစားပေါ် မူတည်. သင်သည်နှစ်ခုစလုံး၏တစ်ဦးရောနှောသုံးနိုင်တယ်. လာရန်ညဉ့်အခါစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒြပ်စင်များနှင့်ပုံနှိပ်ဖိတ်ခေါ်မှုများကိုဖန်တီးပါ. ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦး luscious Valentine Day ကို, အနီရောင်သတ္တုပါးစိတ်နှလုံးကိုသေတ္တာများအတွင်းရှိကတ္တီပါနီ script ထဲမှာရွှေစက္ကူပန်းဦးရစ်သရဖူကိုနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်ဖိတ်ကြားချက်ကိုနေရာ. တစ်ဦးချင်းစီ '' ဘုရင်ကို Wireless ဖဲကြိုးနှင့်လိပ်စာနှင့်အတူကိုတုပ်နှောင်’ သို့မဟုတ်နှလုံး၏ '' Queen ဖြစ်သည်။’
တန်ဖိုးနည်းပါးသည့် corkscrew နှင့်ပြည့်စုံဒေသခံစာရေးကိရိယာစတိုးမှသေတ္တာများနှင့်အတူ gilded glam Go, သတ္တုဖျက်စီးရမဲ့စက္ကူ, နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို. သူတို့အကြိုက်ဆုံးရေစက်သွန်းတစ်ပုလင်းနှင့်အတူရောက်ရှိလာဖို့ဧ​​ည့်သည် Invite '' ဟုပျော်စရာ uncork ။’
တစ်ခုသို့မဟုတ် Cinco de Mayo ပါတီ mini ကို sombreros ဝယ်ယူရန်အတွက်နှင့်
သင့်ရဲ့ဦးထုပ်ကိုဆောင်းအောက်မှာဒီကိုမစောင့်ပါနဲ့တခြမ်း '' အပေါ်ဖတ်တယ်သော၎င်း tag ဖြင့် attach ။’ tag ကို၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, ပုံနှိပ်ပါတီအသေးစိတ်အချက်အလက်များ. သင်အနည်းငယ်ဖိတ်ခေါ်မှုကယ်နှုတ်တော်မူအပ်နိုင်လျှင်, ထိုအခွင့်ကိုသူတို့အားမဝတ်ဖို့ဝတ်စုံအပြည့်အဝအရွယ်အစား toppers ကိုအသုံးပြုကြပြီးဧည့်သည်ကိုဖိတ်ခေါ်.
ကြီးမားသောစုဝေးများအတွက်ဗိုင်းရပ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြန့်ဖို့ Evite.com တူသည့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနည်း.
တိကျမှန်ကန်သောဧည့်သည် count ကိုရရန်ဖုန်း call နှင့်တက်လိုက်ရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်နှင့်နောက်ဆုံးမိနစ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသဘောပေါက်ရန်.
3. အဆိုပါ List ကို: အဘယ်သူသည် ya ့ဖိတ်ခေါ်. အာကာသ၏အရွယ်အစားနှင့်သင်ဖန်တီးလိုသောအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်.. အာကာသပေါင်းရရှိထားသူအရေအတွက် Invite 20% သာယာသောအချစ်နဲ့အောင်မြင်ရန်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကသင်၏မျက်စိဆုံဝင်တိုးနှင့်သင်တစ်ခုခုပြောရမည်ဆိုလျှင်. စိတ်အားထက်သန် "Hello’ အကောင်းဆုံးကိုလိုင်းအစဉ်အဆက်ကိုတီထွင်သည်. ဧည့်သည်ထိုင်သာရှိပြီးပြည်ပမှမှာရပ်နေပါလျက်အပေါ် Plan ကို, ကတတ်တဲ့သွားတယ်အရင်တုန်းကရွေ့လျားပိုမိုလွယ်ကူစေတယ်. တစ်ခုခုဗျူဟာမြောက်ပိုရငျးနှီးစကားပြောဆိုချက်တွေကိုများအတွက်ထိုင်ခုံ့ထားပြီပါနဲ့. သင်သည်ဧည့်သည်တစ်ဦးထက်ပိုသောရင်းနှီးသောချက်တင်အတွက်သင့်အိပ်ခန်းမှဦးတည်သွားချင်ကြဘူး.
ပင်ဖြစ်နိုင်သလောက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏နံပါတ်များကိုသိမ်းဆည်းထားပါဒါပေမယ့်အလွန်အကျွံထွက်အလေးအနက်မ. အမျိုးသမီးများအစောပိုင်း RSVP လေ့ကိုသတိရပါ. အမျိုးသားများမကြာခဏနောက်ဆုံးမိနစ်မှီတိုင်အောင်အစီအစဉ်များလုပ်မယ့်ဟော်မုန်း testosterone ပါတီနေ့ရက်ကိုမြင့်တက်မျှော်လင့်. နံပါတ်ဖြည့်စွက်ရန်သူတို့၏အခြားတစ်ခုတည်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်မိတ်ဆွေတွေကိုအားပေးပါ.
4. အခင်းဖြစ်ပွားရာ: တစ်ဦး va-va-va-voom Valentine လက်ဆောင်အနီရောင်၏စိတ်အားထက်သန်ရိပ်တွင် Fest ကိုချစ် Create, မောင်းသောအထည်ကို, သို့မဟုတ်ပန်းရောင်. အစဉ်အလာနှလုံးနှင့်ပန်းပွင့်ကိုကျော်သွား. အမွေး boas နှင့်အမွေး ticklers နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ဖန်ခွက်ပန်းအိုးဖြည့်ပါ. တူကြဲဖြန့်ပုံနှိပ် teaser: '' ငါ့အကိုယား '', 'Dress Up ကို Play လာကြ' ', 'အ Boa အပေါ်ဒါဟာအပြစ်တင်' ', သင်ကအဓိပ္ပာယ်လိုပဲ '' ပရောပရည်လုပ်ခြင်း’ '' ဟုငါ့ကိုနှင့်အတူကခုန်’ အခန်းထဲလှည့်ပတ်ဖယောင်းတိုင်ထွန်း votives flickering အနီး.
5. I.D. လိုအပ်: ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူလူတွေ့ဆုံရန်အဘို့လုပ် – '' ကိုစားစရာဘို့ ____ တော်မူမည်ကဲ့သို့သောနဲ့မှတ်မိလွယ်တဲ့စာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူပုံနှိပ်ကွက်လပ်ခလုတ်မှ flirtatious အမည်ကိုတံဆိပ်များဖန်တီး’ , 'Only One Night အကြောင်းမူကား, ငါသည် ______ လိမ့်မယ်’ , '' ငါ့အား Meet, ငါသည်အ _______ င်’ '' _____ များအတွက်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းတော်မူမည်’ '' _____ အတူတူရှာ။’ ဧည့်သည်ကွက်လပ်၌ဖြည့်စွက်ရှိသည်များနှင့်အမြဲတမ်းမှတ်စရာများနှင့်အတူသူသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်ကိုရေးထား. ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ info များအတွက်ပါတီဆောင်ပုဒ်နဲ့ space နှင့်အတူ VIP pass lanyards ဖန်တီး. အလွန်ကြီးစွာသောပါတီအမှတ်တရပစ္စည်းအဖြစ်ကို double တာဝန်မ.
ငါသည်အဘယ်သူအားမျှမသိရမည်နည်း 'အဖြစ်မကြာမီသူတို့ဆိုရင် single N အကြီးမားဆုံးကြောက်လရောက်လာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဧည့်သည်မှမိတ်ဆက်ဖို့သေချာပါစေ။’
6. အဆိုပါအပျော် Factor: Icebreakers key ဖြစ်ပါတယ်. အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အမကြာခဏစကားများအတွက်လည်းဆုံးရှုံးမှုမှာဖြစ်ဟန်ရှိ. သူတို့နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တစ်ခုခုပေးပါ. အဓိကအကြောင်းအရာ '' ဂိမ်းများကစားခြင်းဖြစ်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်’ နှင့်သင် twister စာရွက်များနှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ပျဉ်ပြားဖြင့်မြို့ရိုးကိုအလှဆင်. ထိုအခါ icebreaker 'သူတို့ပြောင်းရွှေ့စေရန်ဧည့်သည်လိုအပ်ပါတယ်’ အခြား partygoers မ​​ှဂိမ်းကတိုကင်ယူစုဆောင်းနေဖြင့်.
သို့မဟုတ် 'ဆိုရင် single bingo’ လူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်များနှင့်အတူဂိမ်းကဒ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံဘယ်မှာ. ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပုန်းပေါ်တွင်ဖေါ်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသူကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်. Winner လက်မှတ်ပေါင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဘုတ်အဖွဲ့ဖုံးလွှမ်း.
ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီး '' အစဉ်အလာကိုပေး’ အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်တစ်ခုလိမ် Games. သင့်ဒေသခံ hardware များကိုစတိုးဆိုင်မှာဆင်တူတဲ့ screw နှစ်ခုနှင့်သော့ခလောက်တက် Pick. မိန်းမတို့သည် screw နှစ်ခုနှင့်လူတို့က Give တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ပွဲစဉ်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားအဖြစ်သော့ခလောက်မငြိမ်သက်မှုများနှင့်ဓာတုဗေဒတိုး watch. ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ဝိညာဉ်ကိုအစဉ်အမြဲရှိလူများဆွဲယူ.
7. အဆိုပါသောက်: လက်မှတ်မသောက် Create. ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောစကားလက်ဆုံ starter င်. ဗိုလ်ခြေကိုဖြတ်အပြည့်အဝ bar ရဲ့ဝန်နှင့်စရိတ်ကြာ. သင်သည်အိုးထဲမှာကြိုတင်အတွက် concoction လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်. စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ရေခဲပုံးတစ်ရောင်စုံစုဆောင်းမှုကိုရယူပါဧည့်သည်ကိုရေခဲထည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝတ်ပြုကြကုန်အံ့. အိမ်မှာညဦးယံ relive ချင်တဲ့သူတွေအတွက်သောက်စရာစာရွက်ကတ်များထရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေဖို့သေချာပါစေ. နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်ပြောဆိုမှုမျိုးတွေသင့်ဖျော်ယမကာစပ်ထက်မြက်ဖော်ပြရန်ဖို့သေချာသည်ပြီးတဲ့နောက်.
8. အစားအစာ: သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အများဆုံးပျော်စရာအစားအစာအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူအိမ်ရှင်မဖြစ်နောက်ထပ်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Make. ဧည့်သည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် shish kabobs ကို Customize ကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, လက်ညှိုးထိုးအစားအသောက်ထုပ်ပိုးပြီး, သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့် sundaes, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ်ရှိမှတ်စုများကိုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်သင်တို့အဘို့လျော့နည်းအလုပ်နှင့်သူတို့အဘို့အပိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုဆိုလို.
အခန်းထဲတစ်လျှောက်လုံးအတွက်လည်းမဟာဗျူဟာမြောက်နေရာချ Mini-ကိုက်လည်းဆိုရင် single စပ်လျဉ်းသည်အလွန်. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်နေရင်တောင်, တစ်အရသာရှိတဲ့စာလွန်းဝေးကွာသောဘယ်တော့မှမပါလျှင်သူတို့တစ်တွေကြီးမြတ် connection ကိုချိုးဖျက်ဖို့စရာမလိုပါ. ဒါ့အပြင်သူတို့တစ်တွေစကားလက်ဆုံလွတ်မြောက်ရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားနေရတယ်ဆိုရင်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အနမူနာကြပြီမဟုတ်သောအခန်းကိုဖြတ်ပြီးအချိုပွဲစားပွဲတစ်ခု run ကိုအောင်.
9. အဆိုပါဂီတ: သံကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း. ပထမဦးဆုံးရောက်လာသူများကိုများအတွက် volume up ကို pump. အဆိုပါဂီတလွတ်နေတဲ့နေရာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပါတီသေးစတင်မမူသောခံစားချက်မှအစောပိုင်းဧည့်သည်စောင့်ရှောက်မည်. နံပါတ်သင်သည်ဆင်းတဲ့ volume ကိုဖွင့်သေချာအောင်တိုးမြှင့်အဖြစ်. အလွန်ကြီးစွာသောရိုက်ချက်ချတဲ့အခါသူတို့ကဂီတနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားမနေသင့်.
ကို up-tempo Beats ၏ထောက်ခံမဲကိုနှေးကွေးကြောပိတ်ဆို့မှု Skip. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့တင်ပါးတွင်အနည်းငယ်တော့ဘူးခုန်မယ့်ရင်တောင်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုနဲ့ချဉ်းကပ်ရစေတယ်.
10. နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲတွင်: သင်ဗျူဟာမြောက်အာကာသတလျှောက်လုံးနေရာချဗလာစက္ကူနှင့်အချိန်ရရှိပါသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ. နောက်ဆုံးတော့ရှိလာပါပြီနှင့်သဘောတူညီချက်တံဆိပ်ခတ်ထားလော့ရန်သင့်လျော်သောကိရိယာများကိုမကိုးစားဘဲထက်ပိုမိုဆိုးရွားဘယ်အရာမျှမရှိပါင်. သင့်ရဲ့ဧည့်သည်ဒါစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖြစ်ခြင်းဘို့သင့်ကိုငါတိတ်တဆိတ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်.
အပိုဆု: ပါတီ Scene ပြီးနောက်: ထိုလုပ်နိုင်တဲ့-သင်-get-ME-သူသို့မဟုတ်သူမ၏--အရေအတွက်စကားသံကိုမေးလ်လယ်ပြင်ဆင်. သင့်ရဲ့ဧည့်သည်မည်မှာသေချာပါသည်အောင်သွယ်ပွဲစားအဖြစ်အသစ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို၌သင့်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူမည်. သင်သည်စာတိုက် play တစ်လျှောက်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများလွန်ပေမယ့်ဧည့်သည် divulge မနိုင်’ နေပါစေသင်ပါတီများအတူတကွဆိုင်သည်ဟုဘယ်လောက်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ.